Uyiqala njani iNkampani ephumeleleyo | Martech Zone
NgeCawa, uJuni 28, 2009 Douglas Karr
Kunyaka ophelileyo bendisebenza kwishishini namanye amaqabane. Ukuqala ishishini yeyona projekthi icelomngeni, ibiza kakhulu, kwaye ichitha ixesha endakha ndayenza. Ndikhe ndaba nobambiswano kwaye ndathengisa iimveliso ngaphambili, kodwa ndithetha ngokuqala inkampani efuna utyalomali, abasebenzi, abathengi, njl njl.
Inxalenye yonyaka ophelileyo ibisebenza kwizangqa zoosomashishini abaqhuba amashishini abo okanye abaziqalele awabo amashishini. Ndinethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ndinabahlobo abaninzi kwezi zangqa. Ndibe nentliziyo yokuncokola ngentliziyo uninzi lwabo-bonke bandikhuthazile ukuba ndithathe umtsi.
Uliqala njani ishishini eliyimpumelelo? Khulisa imali? Yakha imveliso? Fumana ilayisensi yakho yeshishini? Fumana iofisi?
Buza usomashishini ngamnye kwaye uya kufumana impendulo eyahlukileyo. Abanye babacebisi bethu basityhalela ukuba sifumane imemorandam yokubekwa kwemveliso kwaye siqale umjikelo osesikweni wokunyusa imali. Le yayingeyonto yokuntywila engabizi mali ukuqala ishishini! Siqale iqumrhu elinamatyala athile kunye ne-PPM, kodwa ezantsi zawa kwintengiso kwaye ukunyusa imali kwaqhubeka.
Ukusukela ngoko, sisebenze nje iiprojekthi ezongezelelweyo ukuxhasa ishishini ngokwethu. Ngokujonga emva, andiqinisekanga ukuba iPPM yayilinyathelo lokuqala elifanelekileyo. Sibetha umhlaba sibaleka ngemfumba yamatyala asemthethweni kwaye akukho prototype. Ndicinga ukuba ndinokubuyisa ixesha, ngesidibanise izixhobo zethu kwaye saqala ukukhula.
Kulula kakhulu ukuchaza ishishini elijikeleze imveliso kunye nomzekelo wemveliso. Ukufumana eyona nto ibandakanyekayo kwishishini yayiyinto elungileyo… ukuba unabanini abangaphezulu kwesinye. Ukuba awuyenzi, andiqinisekanga ukuba uyayidinga de kubethe umthengi wokuqala. Ngokubhekisele kwi-PPM (le yiphakheji enikwe abatyali mali), ungakhathazeki malunga noku de ube sowunayo imali.
Isicwangciso seshishini? Uninzi lwabacebisi bethu basixelele ukuba sihlale kwisicwangciso seshishini kwaye sisebenze, endaweni yoko, ekufumaneni intetho emfutshane kakhulu kunye eyayijolise kubatyali zimali bethu. Unotyalomali othanda i-ROI? Pela ibali le-ROI. Utyalomali othanda ukutshintsha umhlaba? Thetha malunga nendlela oza kulitshintsha ngayo ilizwe. Uqesha abantu abaninzi? Thetha malunga nokukhula kwengqesho inkampani yakho eza kuyenza.
Andikhathazeki yindlela esiyihambileyo, andikholelwa nje ukuba yeyona ilungileyo. Oosomashishini abanenkampani ephumeleleyo phantsi kwebhanti banexesha elilula lokuqalisa inkampani elandelayo. Abatyalomali baphantse bakwenze konke malunga nawe kwaye abantu bokugqibela obenze ubutyebi bajonge phambili kwithuba elilandelayo oqala ngalo.
Impendulo emfutshane kukuba umntu ngamnye endimaziyo uthathe indlela eyahlukileyo kakhulu yokuqala inkampani yabo. Abanye bakha iimveliso kwaye abathengi beza. Abanye baboleka imali ezibhankini. Abanye baboleke kubahlobo nakusapho. Abanye bafumana imali yesibonelelo. Abanye baya kubatyali mali…
Ndicinga ukuba eyona ndlela yokuqalisa inkampani ephumeleleyo kukusebenza ngendlela oziva ukhululekile kuyo… kwaye unamathele kuyo. Zama ukungavumeli abantu bangaphandle (ngakumbi abatyali mali) ukuba baphembelele isikhokelo osithathayo. Yindlela ekufuneka uphumelele ukuyithatha.
Nangona kungekho namnye kubacebisi bethu abavumayo njani ukuyenza, bonke bayavuma ukuba thina kufanele yenze… kwaye uyenze ngoku. Ke… sikhona!